पुटिनले युक्रेनमा आक्रमण गर्लान् ? - Naya Pageपुटिनले युक्रेनमा आक्रमण गर्लान् ? - Naya Page
रुसद्वारा युक्रेनमाथि हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणबाट डराएका उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) साझेदारहरूले युक्रेनमा थप फौज र सैन्य सामग्री पठाएर सहयोग बढाएका छन् । गठबन्धनले आफ्नो कदम युक्रेनको सीमामा रुसले सैन्य शक्ति बढाइरहेको प्रतिक्रियास्वरूप भएको जनाएको छ । मस्कोले आफ्ना कार्यहरू महत्वपूर्ण सुरक्षा हितहरू सुरक्षित गर्न आवश्यक भएको दाबी गर्छ र त्यस क्षेत्रको सुरक्षालाई कमजोर पारेको भनी नेटोलाई दोष दिन्छ ।
द्वन्द्व किन त ?
युक्रेन सोभियत गणतन्त्र हुनुअघि शताब्दीयौँसम्म रुसी साम्राज्यको हिस्सा थियो । सन् १९९१ मा यूएसएसआर विघटन भएपछि युक्रेनले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्‍यो । उसले आफ्नो रुसी साम्राज्यवादी विरासतलाई त्याग्न र पश्चिमासँग झन-झन् घनिष्ठ सम्बन्ध गाँस्न थाल्यो ।
क्रेमलिनप्रति झुकाव भएका युक्रेनी राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचले मस्कोसँग घनिष्ठ सम्बन्धको पक्षमा युरोपेली संघसँगको सहयोगी सम्झौतालाई अस्वीकार गर्ने निणर्यले सन् २०१४ मा जनविद्रोह निम्त्यायो । त्यस विद्रोहले उनलाई हटायो ।
कीभका अनुसार युक्रेनको पूर्वी औद्योगिक केन्द्र डोनबासलाई ध्वस्त पारेको लडाइँमा १४ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्युु भएको छ । मस्कोले भने युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराएको र संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेकोमा अमेरिका र उसको नेटो साझेदारको कडा आलोचना गरेको छ । यस्ता कदमले विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रलाई पुनः प्राप्त गर्न ‘युक्रेनी बाज’लाई प्रोत्साहन मिल्ने उसको भनाइ छ ।
यो रुसले नचाहेको कुरा हो । रुसले युक्रेनलाई नेटोमा सामेल भएको देख्न चाहँदैन । रुसले गएको डिसेम्बरमा अमेरिकासँग युक्रेनलाई नेटो सदस्य बन्न रोक लगाउनु पर्नेसहितका माग राखेको थियो । रुसले पूर्वी युरोपबाट नेटो फिर्ता भएको देख्न चाहन्छ । यस विषयमा मस्कोले पश्चिमाबाट शाब्दिक सुनिश्चितता नभई कानुनी निश्चितता चाहन्छ ।
युक्रेन नेटो सदस्य होइन । तर, ऊ त्यसको सदस्य बन्न चाहन्छ । उसलाई गठबन्धनको साझेदार मानिन्छ । सदस्यताका लागि विचार गर्नुपूर्व कीभले भ्रष्टाचार जस्ता विकृतिलाई जरैदेखि उखेल्नुपर्ने नेटोको भनाइ छ ।
यद्यपि, विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘नेटो सहयोगीहरू, तिनीहरूमध्ये पनि प्रमुख अमेरिका यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य कदम विस्तार गर्न र मस्कोसँगको सम्बन्धलाई थप खतरामा पार्न अनिच्छुक छ ।’ अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले नेटोमा युक्रेनको सदस्यताका लागि समर्थन व्यक्त गरे पनि राष्ट्रपति जो बाइडन यस प्रश्नमा थप अस्पष्ट छन् ।
बाइडनले रुससँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्नेमा ‘पूणर् एकमत’ भएको दाबी गरेका छन् । पेन्टागनले पूर्वी युरोपमा तैनाथ गर्न आठ हजार ५०० सैनिक तम्तयार अवस्थामा राखेको छ । नेटोले यस क्षेत्रको सुरक्षालाई बलियो बनाउन जहाज र जेटहरू पठाइरहेको जनाएको छ ।
राष्ट्रपति पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले यी कार्यले पहिले नै तनावपूणर् अवस्थालाई बढवा दिएको बताए । ‘अमेरिकाले तनाव बढाउँदै छ’, उनले पत्रकारहरूसित भने, ‘हामीले यी अमेरिकी कार्यहरूलाई ठूलो चासोका साथ हेरिरहेका छौँ ।’ रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने कुनै योजना नभएको भन्दै पश्चिमा आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । बरु, पश्चिमाले अवस्थालाई थप बिगारेको आरोप लगाएको छ ।
दुई देशबीच युद्ध हुन्छ/हुँदैन भन्ने अनिश्चित छ । तर, केही विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘रुसले युक्रेनमा द्रुत, निणर्ायक विजयको दाबी गर्न र नेटोको विस्तार र प्रभावको क्षेत्रको बारेमा भविष्यको वार्तामा आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाउन सक्छ ।’
रुसलाई विश्वभरि बैंकबाट बैंकमा पैसा सार्न सकिने स्वीफ्ट वित्तीय प्रणालीबाट बाहिर निकाल्नु उनीहरूले लिन सक्ने कदमहरूमध्ये एक हुनेछ । यसले रुसको अर्थतन्त्रलाई तत्कालै र दीर्घकालीन रूपमा नोक्सान पुर्‍याउनेछ । यस कदमले रुसलाई अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारहरूबाट कटौती गर्न सक्छ । जसमा तेल र ग्यास उत्पादनबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नाफा पनि समावेश छ । त्यो रुसको राजस्वको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
पुटिनले युक्रेनमा आक्रमण गरे रुसलाई डलरको पहुँचबाट वञ्चित गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली आर्थिक हतियार पनि अमेरिकासँग छ । दैनिक कैयौं ट्रिलियन कारोबार हुने डलर अझै पनि विश्वभरको वित्तीय कारोबारमा हावी छ । अमेरिकाले निर्यात नियन्त्रणहरू लागु गर्ने विचार गरिरहेको छ । यसमा अरू कुराका साथसाथै लडाकु विमानहरू र यात्रु जेटहरू उडान गर्न र स्मार्टफोनहरूलाई शक्ति दिने उच्च प्रविधिबाट रुसलाई वञ्चित गर्ने सम्भावना पनि पर्छ । एजेन्सी